အဘတွေကို ပိုင်လွန်းတဲ့ လောပန်းနဲ့ Q ရှောင်တဲ့ မမ (ဖားကန့်က ကိုဗစ်အရှုပ်တော်ပုံ) - Zet Star
အဘတွေကို ပိုင်လွန်းတဲ့ လောပန်းနဲ့ Q ရှောင်တဲ့ မမ (ဖားကန့်က ကိုဗစ်အရှုပ်တော်ပုံ)
September 21, 2020 September 21, 2020 ZCC News	0 Comments
ဖားကန့်မှ Covid 19 အရှုပ်တော်ပုံ ….
ကိုဗစ် ကို ထိပ်ကွက် ၊ အာဏာပိုင်ကို ပဏာဆက်ရန်ကြိုးစားသူနှင့်Q ရှောင် ချင်လို့ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ဝင်လာသူ မိန်းကလေးအကြောင်း …..
မနေ့က ဖားကန့်အဝင် လယ်ပြင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်က အဖြစ်အပျက်ကို ဒီနေ့ဆက်ရေးပါ့မယ် ။ အခုလို ဆက်ရေးရတာဟာ ဥပဒေချိုးဖောက်သူ အမျိုးသမီးကို ယနေ့အချိန်ထိ အရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေ မရှိသေးသလို အားပေးကူညီသူ လောပန်းကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာက အရေးမယူသေးလို့ပါ ။
ဖြစ်စဉ်အစ/အဆုံးကို လယ်ပြင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်က တာဝန်ရှိသူ နောက်တဦးပြောပြတာကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ရေးပြပါ့မယ် ။
ဖားကန့်အဝင် လုံးခင်းကျေးရွာနားက လယ်ပြင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို ခရီးသည်တင်ကားတစီးရောက်လာတယ် ။ခရီးသည်တင်ကားပေါ်မှာ မစိုးစိုး (အမည်လွှဲထား) ဆိုတဲ့ အသက် သုံးဆယ်ဝန်းကျင်ခန့် အမျိုးသမီးတဦးပါလာပါတယ် ။မစိုးစိုးဟာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အင်းတော် မှတ်ပုံတင်ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ဖားကန့်မြို့ မြို့မရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
လယ်ပြင်ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေက တာဝန်အရ လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်တဲ့အခါမှာ ကချင်ပြည်နယ် မှတ်ပုံတင်မဟုတ်တဲ့အတွက် FQဝင်ဘို့ ဖြစ်လာပါတယ် ။ ကချင်ပြည်နယ် မှတ်ပုံတင်မဟုတ်ပဲ ဖားကန့်ကို လာမယ်ဆိုရင် အသွားအလာ ကန့်သတ်ထားတဲ့ ကိုဗစ် -၁၉ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ် တုံ့ပြန်ရေး စင်တာမှာ ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ် ၁၄ (Facility Quarantine 14 )နေရမယ်လို့ အစိုးရက ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် မ စိုးစိုး ကို Qဝင်ဘို့ သူမသွားမဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ကိုယ်တိုင်လာခေါ်ဘို့အကြောင်းကြားရပါတယ် ။ ဖားကန့်မြို့မ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး လာမကြိုခင်မှာပဲ ဖားကန့်မြို့ အေးမြသာယာရပ်ကွက်က လောပန်း ကိုအားတီ ဆိုသူဟာ လင်ခရူဇာ 5P/5575ကားနဲ့ မစိုးစိုးကိုလာကြိုဘို့ လယ်ပြင် စုပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို ရောက်လာပါတယ် ။
မစိုးစိုးကို လာကြိုတာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြတော့ ၊ ဂိတ်တာဝန်ရှိသူတွေက အဲဒီလို ခေါ်သွား၍မရကြောင်း ၊ FQစင်တာကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ကားနဲ့ တာဝန်ပေးထားတဲ့သူတွေသာ ပို့ဆောင်ရတာဖြစ်ကြောင်း ၊ လောပန်းကားနဲ့ ပို့ရင် လောပန်းပါ FQဝင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြတယ် ။
အဲလို ရှင်းပြပြီးနောက် ဖားကန့်မှာရှိတဲ့ တာဝန်ရှိသူအရာရှိတွေဆီ ဖုန်းတွေဆက်ပြီးအကူအညီတောင်းတယ် ။ သူ့လမ်းစဉ်အတိုင်း လုပ်ဘို့ ဟိုကပြန်ပြောတယ် ။ ဂိတ်က တာဝန်ရှိသူအချို့ကိုလည်း ဘာကူညီရမလဲ ဘာလိုလဲ မုန့်ဘိုးပေးရမလား ဆိုတာအထိ ပြောဆိုခဲ့တယ် ။ သူကသာမသိတာ သူ့စကားတွေက ဂိတ်က တာဝန်ရှိသူတွေကို တော်တော်ကို စော်ကားရာ ရောက်နေပါတယ် ။နောက်ဆုံး ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတောင် ဖုန်းခေါ်မယ် ပြောမလားဆိုတာတွေပါလာတယ် ။
သူပိုင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကလည်း အကူအညီတောင်းမရတဲ့အဆုံး FQဝင်ရမယ်ဆို ဖားကန့်ထဲမဝင်တော့ဘူး ၊အင်းတော်ကိုပဲ ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီး ပြန်လှည့်သွားပါလေရော့ ။
ဝသုန္ဒရီမှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်သွားတဲ့ မစိုးစိုး
လယ်ပြင်ဂိတ်က တာဝန်ရှိသူတွေကို FQမဝင်နိုင်လို့ အင်းတော်ကို ပြန်မယ်ဆိုတဲ့ မစိုးစိုးဟာ လယ်ပြင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မရောက်ခင် တဖာလုံအလိုမှာရှိတဲ့ ဝသုန္ဒရီ စားသောက်ဆိုင်မှာ ယာယီစခန်းချပါတယ် ။ ဝသုန္ဒရီ စားသောက်ဆိုင်ကို ဖားကန့်ထဲက လာကြိုတဲ့ လောပန်းကလည်း ကားမောင်းပြီး လိုက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ် ။မစိုးစိုးနဲ့ လောပန်း အားတီတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ မရိုးသားတဲ့ အရိပ်လက္ခဏာတွေ တွေ့ရတာကြောင့် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှ လယ်ပြင်ဂိတ်က တာဝန်ရှိသူတယောက်က မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ….
မပိုင်ပဲ ခြင်ရိုက်ရာက မြွေခြောက်ကိုက်ခံရသူများ ….
လယ်ပြင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ပိတ်ခါ တနာရီအလို ညနေ ခြောက်နာရီလောက်မှာ ဖားကန့်ထဲကနေ မစိုးစိုးကိုလာကြိုတဲ့ လောပန်း ကိုအားတီရဲ့ကားဟာ ဝသုန္ဒရီဘက်ကနေ ဖားကန့်ဘက်ကိုပြန်မောင်းလာပါတယ် ။လယ်ပြင် စစ်ဆေးရေး ဂိတ်က တာဝန်အရ ကိုအားတီရဲ့ ကားကို စစ်ဆေးချိန်မှာ စောစောက ခရီးသည်တင်ကားပေါ်မှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ မစိုးစိုးရဲ့ ခရီးဆောင်အိတ် (ဝါ) အဝတ်ထုပ်ဟာ ကိုအားတီရဲ့ ကားပေါ်မှာ တွေ့လိုက်ရပါတယ် ။ဘာမှပြောခွင့်မရှိတာကြောင့် တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ဒီအတိုင်းနေလိုက်ကြပါတယ် ။ဒါပေမဲ့ မစိုးစိုးဟာ တနည်းနည်းနဲ့ ဖားကန့်ထဲကို ဝင်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုတော့ ဂိတ်တာဝန်ရှိသူတွေက ရိတ်စားမိနေပါတယ် ။
မစိုးစိုးရဲ့အကယ်ဒမီရှော့ နဲ့ တပတ်ရိုက်ခံလိုက်ရသော လယ်ပြင်ဂိတ်က တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ….
ကိုအားတီရဲ့ကားကို စစ်ဆေးပြီး မရှေးမနှောင်းမှာပဲ မစိုးစိုးဟာ ဒေသခံယောင်ဆောင်ကာဆိုင်ကယ်စီးပြီး ဂိတ်ကို တတ်တာပြကာ ဖားကန့်ထဲကို ဝင်သွားပါတော့တယ် ။ မစိုးစိုးအခုလို ဆိုင်ကယ်နဲ့ သွားလိုက်တာကို ဂိတ်တာဝန်ခံတွေကမသိပဲ ပတ်ဝန်းရှိစျေးဆိုင်က ပြည်သူတွေက ပြောမှ လွန်သွားမှ တာဝန်ရှိသူတွေက သိလိုက်ရတာပါ ။
မစိုးစိုးဟာ ခရီးသည်အသွင်ဖျောက် ၊ဒေသခံရုပ်ပေါက်သွားအောင် ဝတ်စုံတွေလဲပြီး ခပ်စုတ်စုတ်ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာ နောက်ကလိုက်စီးရင်း လယ်ပြင်ဂိတ်ကြီးကို အောင်မြင်စွာ ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ် ။ ဒီနေရာမှာ နောက်ယောင်ခံ စောင့်ကြည့်သူပါ မျက်စိလည်သွားအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ မစိုးစိုးရဲ့ အကယ်ဒမီရှော့က ချီးကြူးဘို့ကောင်းပါတယ် ။
မစိုးစိုး မသမာတဲ့နည်းနဲ့ ဖားကန့်ထဲကိုဝင်သွားတာ သိလိုက်တဲ့ လယ်ပြင်ဂိတ် တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ချက်ချင်းဆိုသလို မြို့မရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကိုမောင်ကြီးဆီကို ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားတယ် ။ကိုမောင်ကြီးက ဆက်စုံစမ်းရင်း အတွင်းကျကျ သိရချိန်မှာတော့ ….
ရှက်ရမ်းရမ်းပြီး လက်တန်းဆဲတာကို တဝတပြဲခံလိုက်ရတဲ့ မြို့မအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ….
မြို့မအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက မစိုးစိုးကို မသမာတဲ့နည်းသုံးပြီး ကားနဲ့လာကြိုသူဟာ လောပန်းအားတီလို့ သိရတဲ့အချိန်မှာ ကိုမောင်ကြီးဟာ လောပန်းအားတီကို ဖုန်းဆက်ပြီး “မစိုးစိုး အင်းတော်ကိုပြန်သွားသလား လို့ မေးတဲ့အခါမှာတော့ “မစိုးစိုး သူ့အိမ်မှာ ရှိတယ် ။ ” သတ္တိရှိတဲ့ကောင် လာခေါ်ရဲရင်လာခေါ်ကြည့် “ဆိုပြီး ဟင်းခိုးစားတာလူမိတဲ့သူလို အချီးအပတ် အဆဲမျိုးစုံနဲ့ ကိုမောင်ကြီးကို ကြိမ်းမောင်းခြိမ်းခြောက်ပြီး အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဆဲဆို ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ် ။
ရှက်ရမ်းရမ်ပြီး လက်တန်းဆဲတဲ့ လောပန်း ခုတော့ ထောင်နှုတ်ခမ်း လမ်းလျှောက်နေပြီလား …..
နိုင်ငံတော်က ပေးအပ်တဲ့တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရင်း အဆဲမျိုးစုံနဲ့ ထောပဏာပြုခံရတဲ့ မြို့မအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာ ပြည်သူ့အကျိုးသယ်ပိုးနေရင်း ငွေသာရှိပြီး ယဉ်ကျေးမှုမရှိသူတယောက်ရဲ့ ဆဲဆိုမှုတွေကို မခံနိုင်တာကြောင့် စက်တင်ဘာ၂၀,၂၀၂၀နေ့က ဖားကန့်ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်လိုက်ပါတယ် ။
ဖားကန့်ရဲစခန်းသွားပြီး လောပန်းအားတီကိုအမှုဖွင့်ရာမှာ ခက်ခက်ခဲခဲအမှုဖွင့်ရတယ်လို့လည်း ကိုမောင်ကြီးဆီကသိရပါတယ် ။ “ခင်ဗျားတို့ရဲစခန်းက လက်မခံရင် ကျုပ်က ပြည်နယ်အထိ ဆင်းအမှုဖွင့်မှာ လို့ပြောမှ ရဲစခန်းက အမှုဖွင့်ပေးလိုက်တာပါ ။ ညနေလောက်မှ အမှုဖွင့်ပြီးတာပါ ” ။
နိုင်ငံတော်ကတဖက် ၊ လောပန်း ကတဖက် တရားရင်ဆိုင်ရရင် လောပန်းရဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်ထဲရောင်နေတဲ့ ဖားကန့်ကအာဏာပိုင်တချို့ ဘယ်ဘက်က ရပ်တည်မှာလဲ …. ဒီပွဲက စိတ်ဝင်စားစရာအလွန်ကောင်းပါတယ် ။မြို့မ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကိုမောင်ကြီးဟာ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၂၉၄( ကာယအိန္ဒြေရ ပျက်ပြားအောင်လုပ်မှု ၊ ပုဒ်မ ၃၅၃ ( တာဝန်ဝတ္တရား နှောင့်ယှက်မှု ) စတာတွေနဲ့ အမှုဖွင့်ထားပါပြီ ။
ပုဒ်မ ၂၉၄ လူတဦးတယောက်ကိုနှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ၊ကိုယ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ကာအိန္ဒြေရ ပျက်စီးလုပ်တာဖြစ်ပြီး ငွေဒဏ် ဖြစ်စေ ၊ထောင် ဒဏ် (၃)လဖြစ်စေ ၊ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးကို ချမှတ်နိုင်တယ်လို့ ဥပဒေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ် ။
ပုဒ်မ ၃၅၃ ဟာ နိုင်ငံတော်တာဝန်ဝတ္တရားများကို ထမ်းဆောင်နေသူတဦးဦးအား နှောက်ယှက်ဟန့်တားခြင်းဖြစ်ပြီး ငွေဒဏ်တပ်ရိုက်နိုင်သလို ၊ ထောင်ဒဏ် ( ၂)နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်သလို ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးကိုလည်း ချမှတ်နိုင်တယ်လို့လည်း ဥပဒေက အတည်အလင်းဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ် ။
မြို့မရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမောင်ကြီးဟာ နိုင်ငံတော်က ဥပဒေနဲ့အညီ ခန့်အပ်ထားတဲ့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပါ ။ဦးမောင်ကြီးဟာ နိုင်ငံတော်က တာဝန်ပေးအပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးပေါ်စီမံချက် ဆိုင်ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှု ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်နေစဉ် ယခုလို သာမန်ပြည်သူတဦးရဲ့ ဥပဒေမဲ့ စော်ကားအနိုင်ကျင့်မှုကို ခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
အထက်လူကြီးကို ပိုင်တယ်ဆိုပြီး လက်အောက်ငယ်သား ရပ်ကွက် ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကို ယခုလို ဥပဒေမဲ့ ကြူးလွန်စော်ကားခြင်းမှာ မသင့်လျော်ပါ ။လောပန်းနှင့်အဂတိတရားများ မလွတ်ကင်းသော ဖားကန့်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက အရာရှိ ၊အရာထမ်း ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သွားမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြန်ပါတယ် ။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဒီအမှုရုံးချိန်းတိုင်းမှာ သွားရောက်နားထောင်သင့်ပါတယ် ။
လောပန်း ကျူးလွန်တာဟာ ဒီပုဒ်မ ၂ခုထဲလား ….
လောပန်း ကိုအားတီဟာ လယ်ပြင်စစ်ဆေးဂိတ်ရှိ မစိုးစိုးကို လာကြိုရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ တိုယိုတာ လင်ခရူဇာ 2P/5575 အဖြူရောင်မော်တော်ကားဟာ လိုင်စင်မဲ့(Withoud) ဆိုတာ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးဌာန ( ကညန ) ရဲ့ စစ်ဆေးမှုအရ သိရပါတယ် ။
လိုင်စင်မဲ့ကားစီးတာကရော ဥပဒေချိုးဖောက်တာမဟုတ်ဘူးလား ။ကချင်ပြည်နယ်တခုလုံး လိုင်စင်မဲ့ကားတွေစီးနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့ ဘာမှမဖြစ်ရင် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ။အခုလို နိုင်ငံတော်ရဲ့အထူးစီမံချက်လုပ်ငန်းတွေကို လိုစင်မဲ့ကားစီးပြီး ဖျက်ဆီးဟန့်တားနှောက်ယှက်တာဟာ ပြစ်မှုမြောက်တယ်လို့လည်း ဥပဒေပညာရှင် တဦးက ထောက်ပြထားပါတယ် ။
မစိုးစိုးကို မသမာတဲ့နညျးလမျးသုံးပွီး ဒသေခံအယောငျဆောငျကာ စစျဆေးဂိတျတာဝနျရှိသူမြားကို မလိမျ့တပတျရိုကျပွီးဝငျရောကျလာရာမှာ လောပနျးကိုအားတီဟာ အဆိုပါကားနဲ့ကွိုပွီး ခေါျလာတဲ့အတှကျ ဒသေန်တရ အမိနျ့ ဥပဒခြေိုးဖောကျသူကို အားပေးကူညီရာ ရောကျပါတယျ ။ဒါလညျး ပစျမှုမွောကျတယျလို့သိရပါတယျ ။
ယုတ်စွအဆုံး ကိုအားတီဟာ တရုတ်လူမျိုး ဖြစ်ဘို့များပါတယ် ။ သူကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ နိာင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြားကအစ စီစစ်ဘို့ လိုလာပြီလို့ မြင်ပါတယ် ။တကယ့်အစစ်အမှန် မြန်မာပြည်ဘွားတရုလူမျိုးလား ။ ဘယ်လူဝန်မှု ကြီးကြပ်ရေး(လဝက)ကနေ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဘယ်တုန်းက ထုတ်ပေးခဲ့လည်း ဆိုတာကအစ စီစစ်သင့်ပါပြီ ။
Q ရှောင်တဲ့ မမ ကို ဒေသန္တရာ ဥပဒေ ကဘာလို့အရေးမယူရဲတာလဲ ….
မစိုးစိုး ဆိုသူဟာ တာဝန်ရှိသူတွေက FQဝင်ဘို့ အတန်တန်ပြောနေတဲ့ကြားက ပုံစံပြောင်းပြီး ဖားကန့်မြို့ထဲကို ဥပဒေချိုးဖောက်ပြီး ဝင်လာခဲ့ပါတယ် ။ဖားကန့် ထဲရောက်တော့လည်း FQစခန်းမဝင်ပဲ လောပန်း ကိုအားတီရဲ့နေအိမ်မှာ သက်ဆိုင်ရာကို အကြောင်းမကြားပဲ တည တည်းခိုနေထိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဥပဒေမဲ့ဝင်ရောက်လာသူရော လက်ခံသူရော ပစ်မှုမမြောက်ဘူးလား ။
ထိုတညနေထိုင်မှုက မစိုးစိုးမှာ မတော်တဆ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးရှိခဲ့ပါက ဘယ်လိုတာဝန်ယူမှာပါလဲ ။လောပန်း ကိုအားတီအိမ်မှာ အိပ်စက်ခဲ့တဲ့အတွက် သူမနဲ့ထိစပ်သူတွေပါ FQဝင်ရမှာမဟုတ်လား ။ ဒါက နိုင်ငံတော်က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်အရပြောပြခြင်းပါ ။ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ ဒေသန္တရ ဥပဒေကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ မစိုးစိုးကို သက်ဆိုင်ရာက ဘာကြောင့်အရေးမယူရတာပါလဲ ။
အရေးမယူရဲတာလား ၊ အရေးမယူချင်တာလား ၊အရေးယူခွင့်မရှိတာလား ၊ အရေးမယူတော့ဘူးလား ၊ဒီကိစ္စကို ဒေသအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးတွေကရော သက်ဆိုင်ကို ထောက်ပြပြောဆို ၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ မလုပ်တော့ဘူးလား ။ မြို့မိမြို့ဖတွေကရော ဒီအတိုင်း လက်ပိုက်ကြည့်နေကြတော့မှာလား ၊ ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်တယ်လို့ မခံစားမိဘူးလား ။
သက်ဆိုင်ရာက သိရှိလို့ ဖားကန့်ထဲမှာ တညအိပ်ပြီး ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကို FQလာဝင်ယုံနဲ့ ချိုးဖောက်ထားတဲ့ ဥပဒေက ပြေပျောက်သွားပြီလား ။ဒီကိစ္စဟာ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ လျော့တိလျော့ရဲ နိုင်လွန်းလှတဲ့ ပျော့ညံ့မှုလို့ မြင်ပါတယ် ။
ရောဂါဘယ ကင်းဝေးပြီး ၊ အားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ ။
← အစိုးရ ထောက်ပံ့ငွေကို ကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေးမှာ အကုန်လှူလိုက်တဲ့ သူနာပြုဆရာမလေး မေပြုံးကြည်
ဝေဘာဂီဆေးရုံက ဆရာဝန်မလေး တယောက်ရဲ့ ရင်ထဲကလာတဲ့ အမှန်တရား စကား →